Fikarohana momba ny firaisana Georgian pianist Khatia Buniatishvili ho teraka tamin'ny fanamboaran-tseran'ny mpihira Hongroà sy ny piano Virtuoso Franz Liszt: ny fiainana taloha talenta, ny fiovan'ny maha-olona sy ny lahy - Ny firaisana amin'ny vatana vaovao
Ny Piano Khatia Buniatishvili dia natsangan'ny Composer sy Virtuoso Franz Liszt
Nanoratra tamiko ny mpankafy ny vohikalanay momba ny piano malaza iray antsoina hoe Khatia Buniatishvili, izay teraka tany ambanivohitr'i Géorgie, izay anisan'ny Firaisana Sovietika taloha. Ity mpankafy ity dia nizara ity quote avy amin'i Khatia ity momba ny fandraisam-peo ara-barotra voalohany ny filalaovany ny piano, izay nitranga tao amin'ny 2011:
Buniatishvili: “Fantatro foana fa ny sarimihetsika Liszt no fandraisam-peo voalohany nataoko. Izy irery no nahafahako nanolotra ahy ho firaisankina amin'ny lafiny maro amin'ny fanahiko. ”
Izany dia nitarika ho amin'ny fisainana na ny teoria fa ny Khatia dia mety ho ny vatana vaovao indray ny Franz Liszt.
Khatia Buniatishvili ho teraka tamin'ny vodiondry Franz Liszt
Taorian'izay, nandritra ny fivoriana miaraka amin'ny fampahalalam-baovao tranainy Kevin Ryerson, izay nantsoina mpitari-dalana ho an'ny fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahafaha-manao ny fiainana teo aloha dia mifanandrify avo lenta marina. Ahtun Re nanamafy fa ny Khatia Buniatishvili no fiorenan'i Franz Liszt.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovitovy ny endriky ny endriky ny tarehy na ny taolam-patin'i Franz Liszt sy Khatia Buniatishvili. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ny fiainana taloha talenta: Ny mozikan'ny Franz Liszt dia mamirapiratra amin'ny endrika Khatia Buniatishvili.
Fiovam-pirenena: Hongroà i Liszt, raha teraka tany Georgia kosa i Khatia, anisan'ireo mpikambana ao amin'ny Firaisana Sovietika.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny zaza teraka indray Franz Liszt dia lehilahy, ary i Khatia Buniatishvili dia vehivavy tsara tarehy.